बुध र राहुको भेट, यी ४ राशि हुनेहरुको जीवनमा बढ्नेभयो दुख ! – Ramailo Sandesh
बुध र राहुको भेट, यी ४ राशि हुनेहरुको जीवनमा बढ्नेभयो दुख !
मे महिनाको पहिलो दिन बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरेको छ । मे १ तारिख बिहान ६ बजेर ०४ मिनेटमा बुध मेषबाट वृष राशिमा प्रवेश गरेको हो। बुध वृष राशिमा २६ मे सम्म रहनेछ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार, बैंकिंग आदिको कारक ग्रह हो। वृष राशिमा बुधको प्रवेशले सम्पूर्ण राशिमा फरक-फरक प्रभाव पार्नेछ।
वृष राशिमा बुध र राहु
राहु पहिल्यै वृष राशिमा थियो। बुधको राशि परिवर्तन पश्चात बुध र राहु एकै राशिमा भएको छ । यस्तो हुँदा अशुभ योगको निर्माण हुने ज्योतिषशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। बुध र राहु एक हुँदा बन्ने अशुभ योगलाई जडत्व योग भनिन्छ। यस्तो योगले विभिन्न राशि हुनेहरुको जीवनमा आर्थिक समस्या खडा गर्नेछ।जडत्व योगको सबै भन्दा बढी प्रभाव कसलाई ?
जडत्व योग बनेका कारण मिथुन राशि हुनेहरुको जीवनमा आर्थिक समस्या बढ्नेछ। अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुनेछ। यस अगाडी गरिएका लगानीले प्रतिफल नदिँदा आर्थिक रुपमा कम्जोर भैनेछ। नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने योजना पनि विफल हुनेछन्। सकेसम्म केहि चिजको पनि किनबेच नगरेकै उचित होला।
राहु र बुध ग्रहको भेट हुँदा तुला राशि हुनेहरुको जीवनमा समस्या बढ्नेछ। स्वास्थ्यले साथ नदिँदा दैनिकी प्रभावित हुनेछन्। आर्थिक रुपमा पनि समस्या बढ्नेछन्। पारिवारिक कलहको असर व्यवसायमा पनि पर्न सक्ने हुँदा सचेत रहनुपर्ला। सवारी साधन चलाउँदा तथा यात्रा गर्दा संयमता अपनाउनुपर्ने पनि देखिन्छ।
राहु र बुध ग्रह एक साथ हुँदा धनु राशि हुनेहरुको जीवनमा धेरै नै नकारात्मक परिवर्तन हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ। शत्रुहरु हावी हुन सक्ने हुँदा सतर्क रहन आवश्यक रहनेछ। बिना कारण उठ्ने रिसले समस्या पैदा गर्न सक्ने देखिन्छ। कानुनी रुपमा पनि समस्या बढ्न सक्ला। सकेसम्म नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न केहि समय कुर्दा उचित हुनेछ।
कुम्भ राशि हुनेहरुको जीवनमा विभिन्न उतार-चढाव हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा अवरोध शिर्जना हुनेछन्। आफ्ना सोचिएकाबाटै धोका हुँदा मन विचल्लित रहनेछ। सम्पन्न हुन लागेका कार्य पनि दोहोर्याउनुपर्ने समय आउने देखिन्छ। सके सम्म यात्रा नगरेकै राम्रो होला। परिवारमा पनि कलह बढ्न सक्ने हुँदा बोलिमा नियन्त्रण आवश्यक रहला।
कारमा मृ’तक भेटिएका ३ बालकहरूका आमा बुवा रू’दै मिडियामा